महान पुरुष ! सबैकुरा बिर्सेर लाहुरेले पुन: स्मितालाई घर भित्र्याए ( हेर्नुस मनछुने भिडियो ) |
किङ कोहलीको कप्तानिमा भारतको शानदार जित, इङ्ल्याण्ड दुई दिनमै पत्तासाफ
खेल जित्न भारतको नयाँ ट्रिक, खाल्टै खाल्टोको पिच
महान पुरुष ! सबैकुरा बिर्सेर लाहुरेले पुन: स्मितालाई घर भित्र्याए ( हेर्नुस मनछुने भिडियो )
२०७७, २३ माघ शुक्रबार १७:५६ February 5, 2021 ताजा खबरसमाचार
काठमाडौं । जितेन्द्र यादबसँग १ महिना काठमाडौंको एक होटलमा रङ्गे हात समातिएकी स्मिता लामालाई उनका श्रीमान इन्डियन आर्मी राहुल गुरुङले सबै कुरा भुलेर पुन: बिवाह गर्दै घर भित्र्याएका छन् ।
एक यस्तो घटना हेर्दा झट्ट सिनेमा जस्तै लाग्छ । एक इन्डियन लाहुरेको बुढी नेपालमा परपुरुषसँग लाग्छिन् । यतिसम्मकी उनले आफूलाई फसाएर लगेको भन्छिन् । एक मधेसी मूलका युवाले उनलाई ललाइफकाइ गरे लैजान्छन् र काडमाडौंको एक होटेलमा बन्धक बनाएर राख्छन् ।
काँकडभित्ता पारी भारतको बागडोगरा निवासी नेपाली मूलका युवा राहूल गुरुङ आफ्नी श्रीमती हराएपछि हैरान भए । उनले धेरै प्रयास गरे खोज्नलाई तर, भेटाउन कठिन थियो । तर, उनलाई एक युट्युबरले आफ्नी श्रीमती भेट्टाउन सहज पारिदिए ।
इन्डियन आर्मीमा भएका युवा राहुलले बागडोगराकी स्मिता लामा सँग लगनगाँठो कसेका थिए । उनले आफ्नो विवाहपछि गोर्खाको पालुङटारमा स्मितालाई लिएर आएका थिए । स्मिता केही समय नेपालमै बसिन् । उनीबाट एक नानी युना जन्मिइन् । सबैकुरा राम्रै चल्दै थियो ।
तर, एक्कसी उनकी श्रीमती अर्कै सँग लागिन् र काठमाडौं गइन् । पछि राहुल नेपाल आएर उनको खोजी गरे अहिले उनले श्रीमती भेट्टाएका छन् । श्रीमतीलाई किनिदिएको महंगो मोबाइल हातमा छैन । उनीसँग भएको सुन छैन । तर, पनि राहुल उनलाई माया गरिरहे र अन्ततः सबै कुरा बिर्सेर आफ्नी श्रीमतीलाई पुन घर भित्र्याएका छन् ।
२०७७, १३ फाल्गुन बिहीबार २२:११
२०७७, १३ फाल्गुन बिहीबार २२:०१